It के यो YouTube मा दृश्य र ग्राहकहरु किन्न राम्रो छ? OT GOTAUKA.COM
अन्तिम अद्यावधिक फरवरी 3, 2021 733 0
सबैलाई थाहा छ प्लेटफर्महरू के मनपर्दछ YouTube तिनीहरूसँग आफ्नो समुदायका सदस्यहरूलाई पैसा प्रस्ताव गर्न सक्ने हुनुको खास खासियत छ। यसले व्यक्तिलाई आफ्नो सामान्य जीवनबाट यस प्लेटफर्ममा माइग्रेट गर्न चाहान्छ, तर उनीहरूले समस्याहरू भेट्टाउँछन्।
यो किनभने मानिसहरु भित्र जीवन बनाउनु हो YouTube उनीहरूले उच्च ख्याती कमाउनका लागि पर्याप्त ख्याति प्राप्त गर्न चिन्ता गर्न थाल्नु पर्छ जहाँ लाभहरू उच्चतम सम्भव हुन्छ।
तर धेरै व्यक्तिहरू गाह्रो काम छोड्न खोज्छन्, जस्तो प्राय जसो केस हुन्छ। हामी यसलाई खेलहरूमा देख्न सक्छौं, र हामी यसलाई सामान्यतया कल गर्दछौं जाल, किनकि यसको कुनै अन्य नाम छैन।
यसैले आज हामी तपाईंलाई यस अभ्यासको बारेमा जान्न आवश्यक सबै कुरा बताउनेछौं जुन हालैका वर्षहरूमा प्रख्यात भएको छ, विशेष गरी ती मानिसहरूलाई जो पैसा कमाउनमा रुचि राख्छन्। YouTube
के ग्राहकहरू खरीद गर्न सल्लाह दिइन्छ?
जब एक व्यक्ति सुरु हुन्छ ग्राहकहरू खरीद गर्नुहोस् यिनीहरूलाई प्राय: राम्रोसँग चिनिन्छ Bots। यो मध्यस्थकर्ताहरूको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो YouTube तिनीहरू प्लेटफर्मको अनौठो चालहरूमा नजर राख्छन्।
किन तपाईं सोच्दै हुनुहुन्छ भने ग्राहकहरू खरीद गर्नुहोस् तपाईले यो गर्नु भन्दा पहिले दुई पटक सोच्नुहोस्। समस्याहरूको मात्राले तपाईंलाई ल्याउन सक्ने केही थोरै छैनन्।
यो YouTube मा खरीद ग्राहकहरु किन्न सल्लाह छैन
YouTube यसमा नियमहरू र शर्तहरू छन् जहाँ यो दण्डित गरिएको छ, र यदि उनीहरूले तपाईंलाई यसलाई सक्रिय रूपमा देखेको देखिन्छ भने, यो सम्भव छ कि तपाईंको खाता निलम्बित हुन समाप्त हुन्छ र यसलाई पुन: प्राप्ति गर्न गाह्रो हुन्छ किनकि यो यो प्लेटफर्मको भित्रमा सबैभन्दा दण्डित नियम हो।